DataNumen Outlook Express Repair - ပြန်လည်သိမ်းဆည်းထားသည့်စာများအားမေးလ်ထဲသို့ဖိုင်တွဲတစ်ခုထဲသို့သွင်းပါ Outlook Express
ပင်မစာမျက်နှာ ထုတ်ကုန်များ DataNumen Outlook Express Repair အတွင်းရှိပြန်လည်ရယူထားသောစာများအား Mail Folder ထဲသို့တင်ပါ Outlook Express
အတွင်းရှိပြန်လည်ရယူထားသောစာများအား Mail Folder ထဲသို့တင်ပါ Outlook Express
မှတ်ချက်။ ။ သွင်းကုန်မလည်ပတ်မီသေချာအောင်စစ်ဆေးပါ Outlook Express မက်ဆေ့ခ်ျများတင်သွင်းရမည့်နေရာရှိမေးလ်ဖိုင်တွဲသည်မှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ မဟုတ်ပါက ကျေးဇူးပြု၍ အရန်ကူးပြီးမေးလ်ဖိုင်တွဲနှင့်သက်ဆိုင်သည့် dbx ဖိုင်ကိုဖျက်ပါ။
Start Outlook Express ဖွင့်ထားပါ။
output directory တွင်တင်သွင်းရန်အတွက်မက်ဆေ့ခ်ျအားလုံးကိုရွေးချယ်ပါ။
ထိပ်ဖျား: မက်ဆေ့ခ်ျဖိုင်အုပ်စုတစ်စုကိုရွေးရန်၊ SHIFT ခလုတ်ကိုဖိထားပြီးအုပ်စုထိပ်ရှိစာဖိုင်ဖိုင်ကိုနှိပ်ပါ၊ ထို့နောက်အုပ်စုအောက်ခြေရှိမက်ဆေ့ခ်ျဖိုင်ကိုနှိပ်ပါ။ သင်ရွေးချယ်ပြီးသားအဖွဲ့သို့မက်ဆေ့ခ်ျဖိုင်များကိုထည့်ရန်၊ CTRL ခလုတ်ကိုဖိ။ သင်ထည့်လိုသောမက်ဆေ့ခ်ျဖိုင်များကိုရွေးချယ်ပါ။ ရွေးချယ်ထားသည့်မက်ဆေ့ခ်ျဖိုင်များကိုဖယ်ထုတ်ရန်၊ CTRL ခလုတ်ကိုဖိ။ ရွေးချယ်ထားသောမက်ဆေ့ခ်ျဖိုင်များကိုနှိပ်ပါ။
မက်ဆေ့ခ်ျများကိုထဲသို့ထည့်ပါ tarဖွင့်လှစ်ထဲမှာမေးလ် folder ကိုရယူပါ Outlook Express.
ပြီးတဲ့နောက်၊ ပုံမှန်တင်ပို့သူတွေလိုပဲသင်တင်သွင်းတဲ့စာတွေကိုလည်ပတ်နိုင်ပါတယ် Outlook Express.
သွင်းကုန်လုပ်ငန်းစဉ်၏အဆင့် ၁၊ ၂၊ ၃ ကိုအောက်ပါကာတွန်းတွင်ဖော်ပြထားသည်။